दीपक मनाङे : समयानुकुल फेरिएको पात्र, गुण्डा नाइके कि माननीय ? – Mission Khabar
दीपक मनाङे : समयानुकुल फेरिएको पात्र, गुण्डा नाइके कि माननीय ?
मिसन खबर १५ माघ २०७५, मंगलवार १२:१९
पोखरा–राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे सांसद बन्लान भनेर सायदै कसैले सोचेका थिएनन् होला । तर उनको जीवन यात्रामा एकाएक परिवर्तन आइरहेको छ ।
कहिले रात्रीकालिन रेस्टुरेन्टको कामदार त कहिले बउन्सर, कहिले रेस्टुरेन्ट मालिक अनि प्रहरीबाट लागेको अभियोगलाई आधारमान्दा हप्ता असुली र गुण्डागर्दी । यो मनाङगेले युवा अवस्थामा पाएको उपमा हो । तर अहिले राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको पहिचान सांसदका रुपमा दरिएको छ । सोमबार गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मनाङेलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा सपथ खुवाएपछि निर्वाचन सम्पन्न भएको १४ महीना पछि उनको संसदको यात्राले औपचारिकता पाएको छ ।
अन्यौल र बिवादकैबीच हिजो प्रहरीले गुण्डा नाइकेको दर्जा दिएका व्यक्ति माननिय बनेपछि प्रहरीमाथी नै नैतिक संकट खडा भएको छ । हुन त, मनाङेले आफूलाई व्यवसायी भएको प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रदेशको विकासमा केन्द्रित हुने दाबी गर्ने उनै दीपक मनाङेले चुनावपछिको ८ महीना जेल भित्र बिताएका थिए । थुनामुक्त हुने बित्तिकै सपथको चर्चा चलेपनि एकाएक रोकिएको छ । सोमबार नै काठमाडौंबाट सडक मार्ग हुँदै पोखरा पुगेका मनाङेलाई दबाबमा परेर सपथ खुवाइएको कतिपय बताउँछन् ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १६ उपदफा १ मा ‘सदस्यको पदमा निर्वा्चित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ’ उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा १३ बमोजिम उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी बुँदा ‘ङ’ मा ‘संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको’ उल्लेख छ ।
निर्वाचनका समयमा मनाङेको उम्मेद्वारी उपर उजुरी नपरेका कारण उनले संसद प्रवेशको सौभाग्य पाएका हुन् ।